Haween Isu eekaysiiyay Rag Si Ay U Daawadaan Ciyaar | Gabiley News Online
Haween Isu eekaysiiyay Rag Si Ay U Daawadaan Ciyaar
May 4, 2018 - Written by admin
Dhowr haween ah oo u dhashay dalka Iiraan ayaa soo jiitay dareenka dad badan ka dib markii ay sameeyeen arrin la yaab leh si ay uga qayb galaan ciyaar kubadda cagta ah.
Haweenkan ayaa soo hagaajistay garka ragga iyo calaamadaha kale ee ragga lagu yaqaano si ay dawashada ciyaar kubadda cagta ah uga qayb galaan.
Sawirada haweenkan ayaa si buuxda loogu baahiyay baraha bulshada ee lagu qoro luuqadaha persianka iyo Ingriiska.
Iyadoo aysan jirin mamnuucid rasmi ah oo dumarka ka xaddidaya inaysan aadin goobaha cayaaraha ay ka socdaan, balse hadana waa arrin nadir ah inay dumarka ka qaybgalaan daawashada ciyaaraha dalka Iiraan.
Mid ka mid ah dumarkooda la baahiyay waxay sheegaysa inay tahay markii sadeexaad oo ay farsamadan isticmaasho o ay u labisato sida raga, waxayna sidaas u sheegtay mid ka mid ahwargaysyada dalkaasi ka soo baxa.
Waxayna intaasi ku dartay in mar walba oo ay farsamadan adeegsanayso ay marsato nocya kala duwan oo ah kareemada jirka lagu qurxiyo oo midabka qofka si kale u eekeysiinaya.
Gabadhan ayaa sidoo kale wargayska u sheegtay in hal mar oo kali ah ay ciidamada ammaanka joojiyeen si ay u baaraan ka dibna ay fasaxeen, waxayna hadda ugu baaqaysa dumarka in ay iyada la soo xiriiran si ay khiyaanadan u barto maadaama ay sheegtay in farsamadan ay u baahntahay khibrad culus.
Qaar ka mid ah dadka ayaa u hambalyeeyay oo taageeray sidoo kalana ku dhiirageliyay tillabooyinka ay qaadeen haweenkan halka kuwa kalana ay cambaareeyeen falka ay dumarkani ku kaceen.
Haweenkan ayaa la qabtay iyagoo si dhuumaaleysi ah ku galaya garoonka si ay goob joog uga noqdaan ciyaar socotay oo muhiimad gaar ah lahayd,
Mamnuucidan ayaa la soo rogay ka dib kacaankii islaamiga ahaa ee Iiran ka curtay 1979,.
Dhanka kale afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee Iiran ayaa sheegtay in taageerayaashani la hayay oo kali ah intii ciyaarta socotay.